तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल कार्तिक २५ गते शनिबार – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल कार्तिक २५ गते शनिबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः । पञ्चाङ्ग÷राशी र वारवेला
श्रीसूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु,साधारण नाम संवत्सर, शाके १९३९,विक्रसम्वत २०७४ साल कार्तिक २५ गते शनिबार नेपाल सम्बत ११३८ कछलागा,सन् २०१७ नोभेम्बर ११ तारिक कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि साँझ ६ वजेसम्म, अश्लेषा नक्षत्र अपरान्ह ४ वजेर ४९ मिनेटसम्म,शुक्लयोग,बालवकरण,आनन्दादियोग मानस,सूर्य तुला राशीमा,चन्द्रमा अपरान्ह ४ वजेर ४९ मिनेटसम्म कर्कट उप्रान्त सिंह राशीमा ।
सूर्योदयबाट प्रात ७÷४३ वजेसम्म काल वेला,७÷४३ वजे देखि ९÷४ वजेसम्म शुभ वेला,९÷४ देखि १०÷२५ वजेसम्म रोग वेला,१०÷२५ देखि ११÷४६ वजेसम्म उद्वेग वेला,११÷४६ देखि १÷७ वजेसम्म चर वेला,१÷७ देखि २÷२९ वजेसम्म लाभ वेला, २÷२९ देखि ३ वजेर ५१ मिनेटसम्म अमृत र ३ वजेर ५१ मिनेट देखि सूर्यास्त सम्म काल वेला रहनेछ ।
“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति” । ( नोटः– काल भन्दा उद्वेग,उद्वेग भन्दा चर,चर भन्दा शुभ,शुभ भन्दा लाभ र लाभ भन्दा अमृत वेला राम्रो मानिन्छ ) ज्योतिष पंडितः–वेदनिधि तिमिल्सिना, पोखरा, इमेलः [email protected]
समस्याबाट पूर्ण मूक्ति हुने देखिन्न । आलस्यता बढ्नेछ । आसा र भरोसामा कुनै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट उचित प्रतिफल मिल्ने छैन । आफन्तबाट धोका हुनसक्छ ।
सहास धैर्यता पराक्रम घट्ने छैन । निर्णय क्षमता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हनेछ । सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । साँझपख खर्च वृद्धि एवं आलस्यता बढ्नेछ ।
समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । कारोवार गर्दा विचार गर्नु होला । प्रयास प्रयत्न सफल हुनेछन् । निर्णय क्षमता कमजोर रहनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । काममा स्थायित्व दिनु पर्ने देखिन्छ ।
सहज रुपमा काम हुने छैनन तर निरासा हुने अवस्था पनि आउने छैन । अनावस्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नु होला । घरमा बस्न मन लाग्ने छैन । प्रयत्न गरे धेरै काममा सफलता मिल्नेछ ।
व्यापार व्यवसायबाट नाफा भन्दा घाटा बढि हुनसक्छ । अनावस्यक काममा समय लगानी हुुनेछ । फजुल खर्च पनि बढ्नेछ । झुट्टा कुराले पिरोल्न छाड्ने छैन । साँझपख समयमा सुधार देखिन्छ ।
दिन सामान्य अनुकुल देखिन्छ । गरेका काम सफल हुनेछन् । समयको महत्व बुझेर काम गर्नु होला नत्र आएको अवसर पनि गुम्नेछ । बक्यौता रकम उठाउन सजिलो हुनेछ । व्यापारबाट आय आर्जन बढ्नेछ ।
व्यापारमा सुधारका संकेत देखिने छन् । अधुरा काम फस्र्यौट हुनेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोजी हुनेछ । काम गरेर अनुसारको उपलब्धि हासिल हुनेछ । शत्रु कमजोर हुनेछन् ।
समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । लगनशिलता बढाउनु होला । मानसिक तनाव कम हुनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
काम काज सहज रुपमा हुने छैनन । जे काममा हात हाल्दा पनि तनाव खेप्नु पर्नेछ । घर परिवारमा अशान्ति बढ्न सक्छ । धूर्तहरुको संगत हुनसक्छ सतर्क रहनु होला । अनावस्यक काममा समय र धन लगानी बढ्नेछ ।
दैनिक काम काजमा प्रगति हुनेछ तर समयमा नै काम गर्नु होला । नजिकका व्यक्तिबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । घर परिवारमा सुख शान्ति मिल्नेछ । व्यापारबाट उचित लाभ लिन सकिनेछ ।
परिश्रम बढी गर्नु पर्नेछ । सहजरुपमा काम हुनदिने छैनन । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । काम अनुसारको प्रतिफल पनि राम्रै मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् ।
योजना बद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु होला । आवेगमा आएर काम नगर्नु होला आफैलाई घाटा हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । पढाई लेखाईमा सामान्य प्रगति हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ समय: ०:१५:०५
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण२ गते बुधवार
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण१ गते मंगलवार
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल आषाढ ३२ गते सोमवार
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल आषाढ ३१ गते आइतबार
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल, २०७५ साल आषाढ २९ गते शुक्रवार
पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २७ गते बुधबार
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २६ गते मगलबार